मलाई सहयोग गरिदिनुहोस ! म बाँच्न चाहन्छु — KhabarTweet
मलाई सहयोग गरिदिनुहोस ! म बाँच्न चाहन्छु
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ०१, २०७७ समय: २२:२२:५२
मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, तर नमरेको प्रहर हुँदैन ।
भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ , मान्छे नमर्ने शहर हुँदैन ।।
हो । साँच्चै नेपाली चलचित्रको यो गीतमा भने जस्तै मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन । तर हर प्रहर मानिस मरिरहेको हुन्छ । जहाँ जता भागे जति सुकै ठूलो शहरमा गएपनि मानिस मृत्युवाट भाग्न सक्तैन । यस्तै नियती भोगिरहेका छन् भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका- ३ को विकट गाँउ खार्ताम्छामा जन्मिएका विरवल तामाङ । २१ बर्षको कलिलो उमेरमा व्लड क्यन्सर जस्तो प्राण घातक रोगले गाँजेपछि उनि नेपालको सवैभन्दा ठूलो शहर काठमाडौंमा उपचारको लागि भौंतारिरहेका छन् ।
पिडित युवाले उपचार खर्च अभावमा सहयोगको अपिल गरेका छन् । ईञ्जिनियर वन्ने सपना बोकेर काठमाडौंको एक निजि कलेजमा अध्ययनरत रहँदा रोगले थलिएपछि उपचारको लागि यस्तो अपिल गरेका हुन् । तामाङ काठमाडौंमा काम गर्दै स्थानिय एक कलेजमा अध्ययनलाई पनि अघि वढाउँदै थिए । डेढ बर्ष अघि उनलाई अचानक घुँडा दुख्ने, ज्वारो आउने जस्ता लक्षण देखिए । त्यसपछि उनले नजिकका मेडिकल हलमा र पछि काठमाडौंका विभिन्न हस्पिटलमा उपचारकोलागि चेक जाँच गराए । दर्जनौं हस्पिटलमा रोग पत्ता नलागेपछि उनि धरानको विपि कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चेक गराउन पुगे । त्यहाँ उनलाई प्राण घातक रोग व्लड क्यान्सर भएको रिपोर्ट आयो । व्लड क्यानसरको रिपोर्ट आउँदा उनि छाँगा वाट खसेजस्तो भए ।
नेपालमा व्लड क्यान्सरको उपचार नहुने भएपछि उनलाई भारतको नयाँदिल्ली स्थित एम्स हस्पिटल रेफर गरियो । उनले उपचार खर्च अभाव भएको र तुरुन्त नयाँदिल्ली जान असम्भव भएको वताएपछि उनलाई काठमाडौंको सिभिल हस्पिटल रेफर गरियो । उनि अहिले पनि त्यहिँ सिभिल हस्पिटलमा रोकथामको उपचार गराईरहेका छन् । मासिक ४५ हजारको औषधीमा मात्र खर्च हुने उनले वताए ।
चैत्रवाट लकडाउन शुरुभएपछि त झन उनले धेरै दुःख झेल्नु पर्यो । हस्पिटलमा वेडको अभाव भएपति काठमाडौंका प्रायः सवै हस्पिटलमा उनले धाउनुपर्दा उनको लाखौं खर्च भईसकेको छ । अहिलेसम्म १९ लाख खर्च भईसकेको उनले खवरट्वीट सँगको कुराकानीमा वताए । निम्न स्तरको उनको परिवारले ऋण खोजेर १२ लाख पठाईसकेको छ । घरवाट आउने कुनै आश नभएपछि उनि देश विदेशमा रहेका मनकारी आफन्त, साथीभाई हरुलाई वाच्नको लागि सहयोग मागिरहेकाछन् ।
देश विदेशवाट उनको उपचारको लागि उल्लेख्य सहयोग त आएको छ । तर उनको उपचारमा मोटो रकम खर्च हुने भएकोले यो पर्याप्त छैन । उनको उपचारको लागि हाल सम्म १६ लाख जम्मा भईसकेको तामाङले वताए । ३० लाख खर्च लाग्नेमा बाँकी १४ लाख शंकलन भएमा उनले उपचार खर्च पुग्ने वताएकाछन् ।
उनि चाँडै ठीक भएर आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि वढाउन चाहन्छन् । उनि आँफु ठीक भएर समाजमा केहि गरेर देखाउने अठोटका साथ उपचारको लागि रहेको वताउँछन् । उनको विराम पहिलो स्टेपमै भएकोले उपचार सम्भव हुने उनको तर्क छ । नेपालकी राष्ट्रपटि विद्या देवि भण्डारी, नायिका मनिसा कोईरालालाई पनि सोहि किसिमको विराम भएको र उनिहरुको दोस्रो स्टेपमा पुगेतापनि उपचार भएकोले तामांगले आफ्नो पनि उपचार हुनेमा ढुक्क रहेको वताए ।
उनले सिधा सम्पर्क गरेर वा बैंक खातामा सहयोग गर्न सकिने अपिल गरेका छन् । उनको फोन नं ९८२८९७४०९१ र एन.आई.सी.बैंकको न्युरोड शाखाको उनको आफ्नै खाता नम्वर ०६५७०३६९४५२५२४०१ मा सहयोगको निमित्त विरवल तामांगले अपिल गरेकाछन् ।